Ajụjụ: Ọ ga-eme atụmatụ B mebie okirikiri gị - BikeHike
QA & Nyocha
Ịnya igwe na ahụike
Gbanwee ụdị ọchụchọ
Ajụjụ: Ọ ga-eme atụmatụ B mebie okirikiri gị
Ihe na October 29, 2021 By pịa
Ogologo oge ole ka Atụmatụ B na-emebi okirikiri gị?
Ụtụtụ mgbe ọgwụ gachara nwere ike imebi okirikiri gị ruo ọnwa ole na ole?
Ị nwere ike ịnweta oge nke abụọ mgbe ị nwetasịrị Atụmatụ B?
Atụmatụ B ọ na-agbanwe ovulation gị?
Atụmatụ B nwere ike ịda?
Ụtụtụ na-esote pill nwere ike imetụta oge gị ọnwa abụọ ka e mesịrị?
Ị nwere ike ime ọpụpụ mgbe ị mechara atụmatụ B?
Kedu ka m ga-esi mara ma m na-amụ nwa?
Gịnị bụ ihe ịrịba ama nke ovulation?
Kedu ka m ga-esi mara mgbe m na-amụ nwa?
Ọ nwere onye ọ bụla tụụrụ ime mgbe ọ gụchara atụmatụ B?
Mkpụrụ ọgwụ ụtụtụ-mgbe ọ na-arụ ọrụ ma ọ bụrụ na ọ bata n'ime gị?
Ịṅụ Plan B ọ na-emetụta nwa gị?
Atụmatụ B ọ na-emerụ ahụ ma ọ bụrụ na ị dịla ime?
Atụmatụ B nwere ike inye gị nnwale afọ ime dị mma?
Kedu ihe ịrịba ama nke ịtụrụ ime n'izu mbụ?
Kedu ka ị ga-esi mara ma gị na-eme nri n'ụlọ?
Ị nwere ike ịtụrụ ime ma ọ bụrụ na ị naghị amụ nwa?
Kedu ka m ga-esi mara ma ọ bụrụ na anaghị m akwa nwa?
Ụbọchị ole ka ị tụrụ ime?
A na-ahụ Levonorgestrel n'ime ọgwụ mgbochi ịmụ nwa, mana atụmatụ B nwere oke dose nke nwere ike ịgbanwe ọkwa hormone nke anụ ahụ gị. Hormone ndị ahụ agbakwunyere nwere ike, n'aka nke ya, na-emetụta usoro nsọ nwanyị, na-eduga n'oge mbụ ma ọ bụ na-egbu oge yana ọbara ọgbụgba dị arọ ma ọ bụ dị ọkụ.
Ọtụtụ n'ime mgbanwe nke ọgwụ mgbochi mberede dị ka Plan B anaghị adịgide karịa otu oge ịhụ nsọ. Ọ bụrụ na oge gị agafeela otu izu mgbe i mechara atụmatụ B, enwere ohere na ị nwere ike ime, yabụ tụlee ịnwale ule ime.
Inweta atụmatụ B (nke a na-akpọkwa mgbochi mgbochi mberede, ma ọ bụ ọgwụ ụtụtụ) nwere ike gbanwee oge ịhụ nsọ mmadụ ruo nwa oge, yabụ oge enyi gị nwanyị ga-adị iche ma ọ dịkarịa ala otu ọnwa. Ọ nweghị ihe na-emerụ ahụ ma ọ bụ dị ize ndụ gbasara iji ọgwụ ụtụtụ gachara mgbe ọ bụla achọrọ ya.
Ụfọdụ ọbara ọgbụgba na-adịghị mgbe niile - nke a makwaara dị ka ntụpọ - nwere ike ime mgbe ị nachara ọgwụ ụtụtụ-mgbe ọ gasịrị. Inweta oge gị mgbe ị were ọgwụ mgbochi mberede (EC) bụ ihe na-egosi na ị dịghị ime. Ọ dịkwa mma ka oge gị na-adị arọ ma ọ bụ dị nfe, ma ọ bụ tupu oge ma ọ bụ karịa ka ọ na-adị mgbe ị were EC.
Dị ka akara ngwaahịa si dị, Atụmatụ B na-egbochi ma ọ bụ na-egbu oge ovulation, ma ọ bụ ntọhapụ nke akwa. Ọ nwekwara ike igbochi spam nwoke na nwanyị, mgbe akwa na spam na-ejikọta.
Mkpụrụ ọgwụ mgbochi mberede nke otu dose na-egbochi ịtụrụ ime ihe dịka 50-100% nke oge ahụ. Ụfọdụ ihe kpatara ọgwụ mgbochi mberede mberede nwere ike isi daa gụnyere oge ovulation, BMI na mmekọrịta ọgwụ.
"Nri ụtụtụ na-esote pill nwere ike igbu oge ị ga-abịa n'oge ọzọ mana ọ naghị eme ya mgbe niile. Julia na-ekwu, “Otú o sina dị, ọ bụrụ na oge ịhụ nsọ gị agafeela ihe karịrị ụbọchị asaa, i kwesịrị ime ule ime ime.”
Atụmatụ B enweghị ike ime ka ime ọpụpụ ma ọ bụ mebie gị ma ọ bụrụ na ị dị ime. Ọ bụrụ na ị nwetaghị ọbara ọgbụgba ọ bụla n'ime izu 3 ka ị werechara atụmatụ B, kpọọ Ụlọ Ọrụ Ahụike na 685-2470 maka oge atọrọ.
ogologo oge nke ịhụ nsọ gị - ovulation na-apụtakarị ihe dị ka ụbọchị 10 ruo 16 tupu oge nsọ gị amalite, yabụ ị nwere ike ịrụpụta ọrụ mgbe ị nwere ike ịpụ akwa ma ọ bụrụ na ị na-enwe okirikiri. imi nke cervical gị - ị nwere ike ịhụ mmiri mmiri, nke na-edochaghị anya na nke na-amị amị n'oge oge ịmụ nwa.
Ihe ịrịba ama nke Ovulation Nsonaazụ dị mma na ule nwa nwa. Mkpịsị ọnụ cervical na-eme nri. Ọchịchọ Mmekọahụ Na-abawanye. Mmụba okpomọkụ nke ahụ Basal. Mgbanwe n'ọnọdụ Cervical. Obi nro ara. Ụdị Saliva Ferning. Ovulation mgbu.
Ihe ịrịba ama nke Ovulation Bilie na basal ahụ okpomọkụ, ọ na-adịkarị 1/2 ruo 1 ogo, nke a na-atụ site na temometa. Ọkwa dị elu nke hormone luteinizing (LH), atụnyere na ngwa ovulation n'ụlọ. Imiri cervical, ma ọ bụ mpụta nke ikpu, nwere ike ịpụta nke ọma, dị gịrịgịrị, na gbatịa, dị ka akwa ọcha. Adị nro ara. Na-agba agba.
A na-eme atụmatụ na 0.6 ruo 2.6% nke ndị inyom na-aṅụ ọgwụ ụtụtụ mgbe ha nwesịrị mmekọahụ na-enweghị nchebe ka ga-atụrụ ime. Ihe ndị mmadụ maara - na amaghị - gbasara ọgwụ ụtụtụ na-esote ka ewebatara n'uche mgbe onye edemede Refinery29 kọsara akụkọ ya banyere ịtụrụ ime n'agbanyeghị ịṅụ ọgwụ mgbochi mberede.
ee ọ ka ga-arụ ọrụ. Ihe ka ọtụtụ n'ime nchọpụta ahụ na-ekpughe na iji Atụmatụ B adịghị eme mgbanwe ọ bụla na mkpuchi nke akpanwa (endometrium). Mba - mgbochi mgbochi mberede (aka the morning-after pill) nwere ike inye aka gbochie ịtụrụ ime mgbe inwe mmekọahụ na-echebebeghị, ọ bụghị na mbụ.
Atụmatụ B agaghị emerụ nwa ebu n'afọ na-eto eto. Ọ bụrụ na ejiri atụmatụ B mehiere n'oge ime ime, ọ gaghị emerụ nwa ebu n'afọ na-eto eto. Iji atụmatụ B agaghị emetụta ikike nwanyị ịtụrụ ime n'ọdịnihu. Ụmụ nwanyị nwere ike idowe ọgwụ n'ụlọ ma ọ bụrụ na ihe mberede mere.
Atụmatụ B bụ ọgwụ mgbochi ime, nke pụtara na ọ na-egbochi afọ ime. Ọ bụrụ na ị dịlarị ime, pill agaghị arụ ọrụ. Ọgwụ a "agaghị akpaghasị ma ọ bụ emetụta ime dị adị," dị ka Teva si kwuo.
Atụmatụ B bụ ihe mgbochi mgbochi mberede, ma ekwesịrị iburu ya n'ime awa 72 nke enwere ike ịtụtụrụ ime. Ọ gaghị emetụta nsonaazụ ule afọ ime gị. N'ihi na ule ime nwa ezighi ezi 72 awa ka a tụchara ime, Atụmatụ B adịghị egbochi.
Mgbaàmà ime ime n'ime izu 1 ọgbụgbọ na ma ọ bụ na-enweghị vomiting. ara na-agbanwe gụnyere ịdị nro, ọzịza, ma ọ bụ mmetụta tingling, ma ọ bụ veins na-acha anụnụ anụnụ a na-ahụ anya. mmamịrị ugboro ugboro. isi ọwụwa. elu basal ahu okpomọkụ. bloating na afọ ma ọ bụ gas. pelvic dị nro ma ọ bụ ahụ erughị ala na-enweghị ọbara ọgbụgba. ike ọgwụgwụ ma ọ bụ ike ọgwụgwụ.
Ọtụtụ ule FSH n'ụlọ na-adị ka ule afọ ime nke a na-eme n'ụlọ. Maka nnwale dị mfe, jiri obere iko ịnakọta mmamịrị site na mmamịrị mbụ nke ụbọchị. Debe mkpanaka ule ahụ n'ime ihe nlele mmamịrị wee debe ya na mbara ihu ka nsonaazụ nsonaazụ ule na -edeba aha.
Ị nwere ike ịtụrụ ime ma ọ bụrụ na ị na-enwe mmekọahụ na-enweghị nchebe ebe ọ bụla site na ụbọchị 5 tupu ovulation ruo ụbọchị 1 mgbe ovulation gasịrị. Ị nweghị ike ịtụrụ ime ma ọ bụrụ na ị naghị amụ nwa n'ihi na ọ dịghị akwa maka spam na-agbaba. Mgbe ị nwere okirikiri ịhụ nsọ na-enweghị ovuating, a na-akpọ ya okirikiri anovulatory.
Isi ihe mgbaàmà nke infertility bụ enweghị ike ịtụrụ ime. Oge ịhụ nsọ nke toro ogologo (ụbọchị 35 ma ọ bụ karịa), dị mkpụmkpụ (ihe na-erughị ụbọchị iri abụọ na otu), nke na-adịghị ahụkebe ma ọ bụ na-anọghị ya nwere ike ịpụta na ị naghị akwa nwa.
Ime ime ga-ekwe omume na teknụzụ naanị ma ọ bụrụ na ị na-enwe mmekọahụ n'ime ụbọchị ise tupu ovulation ma ọ bụ n'ụbọchị ovulation. Mana ụbọchị kacha eme nri bụ ụbọchị atọ na-eduga yana gụnyere ovulation. Inwe mmekọahụ n'oge a na-enye gị ohere kacha mma ịtụrụ ime.
Azịza ngwa ngwa: Nwere ike iji okirikiri m mee atụmatụ B ọgbaghara
Atụmatụ B na-emebi usoro nsọ nsọ gị
Azịza ọsọ ọsọ: Ọ na-eme atụmatụ B Pill mess Up Cycle
Azịza ngwa ngwa: Nwere ike ịhazi okirikiri oge ọgba aghara B
Nwere ike iji okirikiri gị mee atụmatụ B ọgbaghara
Ga-eme atụmatụ B mebie okirikiri m
Azịza ngwa ngwa: Enwere ike ịhazi B mebie okirikiri oge m
Nwere ike ịhazi B mebie okirikiri gị ọzọ
Ajụjụ: Atụmatụ B ọ̀ mebiela usoro nsọ nsọ gị
Ajụjụ: Ogologo oge ole ka atụmatụ B ọgbaghara ga-adị
Ajụjụ: Nwere ike ịhazi B imebi usoro nsọ nwanyị gị
Azịza ngwa ngwa: Nwere ike ịhazi B ọgbaghara na okirikiri oge gị
Previous Post: Ajụjụ: Otu Cycle nke Testosterone ga-emerụ gị ahụ
Next Post: Azịza ngwa ngwa: Kedu ụlọ oriri na ọṅụṅụ ị nwere ike ịhụ The Ball Drop Na Nyc
Bụ Flounder Azụ Mmiri oyi
Mmiri distilled dị mma maka azụ
Azịza ngwa ngwa: Mmiri distilled dị mma maka azụ Betta
Ajụjụ: Kedu ka mmiri azụ Betta kwesịrị ịdị ọkụ
Ajụjụ: Otu esi eme ka mmiri kpoo ọkụ n'ime ọdọ mmiri
Ajụjụ: Otu esi agbaze azụ oyi n'ime mmiri
Azịza ngwa ngwa: Otu esi akwụsị mmiri na-ekupụ site na tankị azụ
Ajụjụ: Otu esi ahụ azụ na mmiri
Azịza ngwa ngwa: Otu esi ewepụ chloramine na mmiri maka azụ
Azịza ngwa ngwa: Otu esi etinye oxygen na mmiri maka azụ na-enweghị mgbapụta
Nwebiisinka © 2021 BikeHike.
Bikehike.org Onye so na Amazon LLC Associates Programme